शाकाहारी भोजन खानु यसकारण फाइदाजनक - ज्ञानविज्ञान
यस विषयमा धार्मिक दृष्टिले बहस हुन सक्छ । तर, स्वास्थ्य र वैज्ञानिक दृष्टिले भने त्यति ठूलो बहस छैन । विभिन्न अनुसन्धानले पत्ता लगाइसकेको कुरा के हो भने मांसाहारीभन्दा कैयौँ गुणा बढी शाकाहारी भोजन फाइदाजनक हुन्छ र शाकाहारीको आयु पनि लामो हुन्छ ।
मासुले के गर्छ ?
मांसाहारीको तौल बढी हुन्छ । जसले गर्दा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बढी कोलेस्ट्रोलजस्ता रोग लाग्ने गर्छ । मांसाहारी मानिसलाई आन्द्रालगायत अरू क्यान्सरको पनि उच्च जोखिम हुन्छ ।
मांसाहारीलाई मुटुरोगको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा मांसाहारमा कार्बोहाइड्रेट कम हुन्छ । प्रोटिन र मिनरल्सको मात्रा बढी हुन्छ । यी दुवै फाइदाजनक छ ।
तर, हुर्कंदै गरेका कुपोषित बच्चाहरूका लागि मात्र यस्तो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिका लागि भने मासु खानु फाइदाजनक छैन । किनकि, यसमा बोसोको मात्रा हुन्छ । जसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
अहिलेको अवस्थामा शरीरलाई फाइबरको आवश्यकता निकै बढी हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल घटाउने काम गर्छ । तर, फाइबर मासुबाट पाइँदैन ।
एउटा मात्र कुरा के भने मासुमा भिटामिन बी–१२ को मात्रा हुन्छ । जुन शाकाहारीबाट पाइँदैन । यो तत्वले नसासम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ । तर, सबै शाकाहारी भोजनमा भिटामिन बी–१२ हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन ।
मांसाहारीमा ओभर न्युट्रिसनको समस्या हुन्छ, जसले दूरगामी असर पार्छ । त्यसैले हामीले स्वाद र स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राखेर खानु जरुरी हुन्छ ।
मसु कसरी खाने ?
आफ्नो शरीरको अवस्था के छ र मासुबाट के–के तत्व पाइन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मासुको प्रयोग गर्नुपर्छ । मासु आफैँमा हानिकारक भए तापनि धेरैले अत्यधिक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यदि खाइहाल्ने हो भने हप्तामा एक दिनभन्दा बढी खानु राम्रो होइन ।
र, त्यसको परिमाणमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मासु किन्दा यसको क्वालिटीको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकदमै कम बोसो भएको मासु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मासु लिएपछि पकाउने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । नत्र शरीरलाई हानि पु¥याउँछ । ग्रिल, बेकिङ गरेर र माइक्रो ओभनमा पकाउँदा फ्राई हुन्छ र असर पनि कम गर्छ ।
मासुमा प्रयोग गर्ने तेलको मात्रालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मासु आफैँमा बोसो हुने भएकाले राखेको थप तेलले असर गर्छ । कहिल्यै पनि मासु मात्र प्रयोग गर्नुहुँदैन । त्यसको साथमा फाइबरयुक्त सलाद, सागलगायतको पनि सँगै प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ ।
सकेसम्म रेस्टुरेन्टमा तयार पारेको मासुको प्रयोग गर्नुहुँदैन । रेस्टुरेन्टमा पाकेका खाना स्वस्थभन्दा पनि स्वाद र कस्टलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको हुन्छ । जसले नराम्रो असर पु-याउँछ ।
रेड मिटको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यदि गर्ने नै मन भए महिनामा एकपटक वा निकै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । खसी, राँगालगायतमा रेड मिट हुन्छ र यसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ ।
धेरैलाई लाग्छ कि चिकेन ह्वाइट मिट हो र यसले कोलेस्ट्रोल बढाउँदैन, जुन गलत हो । यसमा पनि फ्याट हुन्छ । अन्डाको पहेँलो भागमा अत्यधिक कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुन्छ । त्यसैले यसको पनि बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
माछाबाट अनस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, जसले मुटु र मोटोपनमा असर गर्दैन । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । तर, यसलाई डिप फ्राई गरेर प्रयोग गर्दा भने यसको अनस्याचुरेटेड फ्याट नष्ट हुन्छ र स्वास्थ्यमा असर पु-याउँछ ।
डिप फ्रिजमा राखिएको ससेस, मःमजस्ता प्रोसेस्ड मिट खानेको संख्या पनि ठूलो छ, जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेहका रोगीले मासुको प्रयोग नै नगर्दा राम्रो ।
शाकाहारी भोजनको फाईदाहरु
* वनस्पतिहरुबाट प्राप्त प्रोटीन शरीरको अमीनो एसिडको आवश्यक मात्राको लागि पर्याप्त छ, बरु विभिन्न प्रकारको वनस्पति आधारित पदार्थहरुको सेवन गरियोस ।
* शाकाहारी हुनु कुनै हानी छैन । मांसाहारिहरुलाई जुन तत्व मासुबाट प्राप्त हुन्छ, त्यहि तत्व शाकाहारिहरुलाई बिभिन्न प्रकारको शाग शव्जीबाट प्राप्त हुन्छ । प्रोटीन जो कि माछा, मासु र अण्डाबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो वनस्पतिबाट पनि प्राप्त हुन्छ यस्को अर्थ यो हो होईन कि मासुनै खायो ।
मानव शरीरलाई कार्य गर्नको लागि यस्तो कुनै पौष्टिक तत्व छैन, जो वनस्पतिबाट प्राप्त हुन नसकोस । मैले कहिलेकाहिं विकासी अण्डा खान्छु अर्थात भाले कुखुराको बिज नपरेको । शाकाहारी हुनु भनेको पाप कर्मबाट पनि बचाउंछ भनेर मैले बुझेकोछु ।
फोलेटको अत्यधिक मात्रामा हुनुको कारण र न्यून मात्रामा सेचुरेटेड वोसो, कोलेस्ट्रॉल र पशु प्रोटीन मात्राको कारण शाकाहारी भोजनले हामीलाई रोगहरुबाट बचाउंछ। म मांशाहारी भएको भए म धेरै रोगबाट पिडित हुने थिएं।
* शाकाहारिहरुमा हृदयको रक्त पठाउने धमनिहरु सित संम्बंन्धित बिमारीको सम्भावना कम हुन्छ। शाकाहारिहरुमा कुल तरल कोलेस्ट्रॉल तथा कम-घनत्व भएको लायपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉलको मात्रा सामान्यतः कम पाईन्छ, तर उच्च-घनत्व भएको लायपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉलको मात्रा यस कुरामा निर्भर गर्छ कि तपाई कुन प्रकारको शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ।
* शाकाहारिहरुमा हाई ब्लड प्रेशरको सम्भावना मांसाहारिहरु भन्दा कम हुन्छ र यो भार र नुनमा निर्भर गर्दैन ।म शाकाहारी भएकै कारणले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमाछ । यसको कारक यो पनि हुन सक्छ कि ति कॉम्लेक्स काब्रोहाईड्रेट धेरै मात्रामा लिन्छन् र शारीरिक स्थूलता यिनमा कम हुन्छ ।
* फोक्सो र ठूलो आंतको क्यान्सर शाकाहारिहरुमा कम हुन्छ। यसको कारण यो हुन्छ कि शाकाहारी रेशायुक्त फल र सब्जिहरुको बढी खान्छन्।
* विश्वभरीबाट लिईएको तथ्यांकले देखाउंछ कि वनस्पति आधारित भोजन गर्नेहरुमा स्तनको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ। कारण शाकाहारिहरुमा एस्ट्रोजनको कम मात्रा सहायक पाईन्छ।
* शाकाहारी भोजन मिर्गौला सित सम्बंन्धित रोगहरुको रोकथाममा सहायक हुन सक्छ। अध्ययनमा यो थाहाभएकोछ कि वनस्पतिहरुमा पाईने केहि प्रोटीन जीवित हुने संभावना बढ़ाउंछ र पिशाबबाट प्रोटीन निस्कनु, कोशिकाहरुबाट रक्त छानिने गति, मिर्गौलामा रक्त संचार र मिर्गौला सित सम्बन्धित विकार मांसाहारिहरुको तुलनामा शाकाहारिहरुमा कम पाईन्छ ।
* वनस्पतिहरुबाट प्राप्त प्रोटीन शरीरको अमीनो एसिडको आवश्यक मात्राको लागि पर्याप्त छ, बरु विभिन्न प्रकारको वनस्पति आधारित पदार्थहरुको सेवन गरियोस । शोधहरुले जानकारी पाईएकोछ छ कि केहि विभिन्न स्रोतहरुबाट प्रोटीन लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, तपाईं पूरै दिन भरीमा अमीनों एसिडको यस प्रकार सेवन गर्नुस जो नाईट्रोजनको पर्याप्त मात्रा शरीरमा बनाई राख्नुस ।
त्यसै त शाकाहारी भोजनमा प्रोटीनको मात्रा कम हुन्छ, तर शाकाहारी व्यक्ति प्रोटीनको आफ्नो आवश्यकता संतुलित भोजन लिएर पूरा गर्न सक्छन् । शाकाहारी हुनाले विचारलाई शुद्ध बनाउन पनि सहयोग गर्छ । शाकाहारी मांसाहारीको तुलनामा कम तनावमा हुन्छन् ।
रुसोले भनेका छन्, ‘गो ब्याक टु नेचर’ । जब हामीले प्रकृतिलाई फलो गर्छाैं, शाकाहारी खान्छौँ, तब हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो पोजिसनमा रहन्छ । संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली जनावरको रूपमा हात्तीलाई लिइन्छ । र, हात्ती पूर्ण रूपमा शाकाहारी हो । यो बुझ्नुभयो भने तपाईं पक्कै पनि शाकाहारी बन्नुहुन्छ ।
Topics #मांसाहारीका बेफाइदा #शाकाहारी भोजन #शाकाहारीका फाइदा
Don't Miss it गोलभेँडाकाे यस्ताे फाइदा बारे जानकारी पाए पछि अचम्मित पर्नुहुनेछ